अार्थिक/अर्थ – Page3– Karnalikhabar
इलाममा करिब पाँच अर्बको दूध उत्पादन
प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ ३, २०७४
इलाम । दूध उत्पादनमा अग्रणी जिल्लाका रूपमा कहलिएको यस जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दूध उत्पादनमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आव २०७२÷०७३ मा एक लाख २१ हजार ५६२ मे.ट. दूध उत्पादन भएकोमा गत वर्ष २०७३÷०७४ मा एक लाख २३
राहत लिएर गृह जिल्ला पुगे गायक प्रमोद
झापा । चर्चित गायक प्रमोद खरेल शुक्रबार झापाको कचनकबल गाउँपालिकाका बाढी पीडितलाई राहत सामग्री लिएर पुग्दा पीडितहरुमा खुशीको सिमा थिएन । रेडियोमा सुन्न र टिभीमा देख्न मात्र पाएको गायकलाई आँखा अगाडि नै देख्न पाउँदा उनीहरु
बाढी पीडितलाई २५ करोड सहयोग गर्ने मोदीको बचन
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ २, २०७४
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । देउवासंगको कुराकानीका क्रममा मोदीले बाढी र पहिरोका कारण नेपालमा भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै २५ करोड
सीइओले राजिनामा दिंदा ३२ हजार करोड चट्
काठमाडौं । भारतको चर्चित आईटी कम्पनी इन्फोसिस सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक विशाल सिक्काले शुक्रवार आफ्नो पदबाट राजिनामा दिंदा सो कम्पनीले ३२ हजार करोड गुमाएको छ । उनले राजिनामा दिएको खबर सार्वजनिक हुनासाथ यसको शेयरमा आएको ठुलो
रु. एक अर्ब बराबरकोे कृषि उपज नष्ट
गौशाला । बाढीका कारण महोत्तरी जिल्लामा रु एक अर्ब मूल्य बराबरको कृषि उपज नष्ट भएको छ । रातो, जंघा, विग्ही, अंकुशी, भव्सीमा आएको भीषण बाढीले जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकासहित मटिहानी, रामगोपालपुर, लोहारपट्टी, मनरा, एकडारा,
चितवनमा बाढीले चौध करोडको क्षति
चितवन । बाढीका कारण जिल्लामा रु १४ करोड ४८ लाख एक हजार बराबरको कृषि उपज क्षति भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति माछामा भएको छ । राप्ति, बूढीराप्ति, रिउ, कयर, लदरी लगायतका नदीको बाढी बस्तीमा
काठमाडौं। एनआइसी एसिया बैंकले ‘डबल डिपोजिट’ नामक नयाँ निक्षेप योजना ल्याएको छ। ग्राहकलाई अधिकतम प्रतिफल दिने उद्देश्यले रकम जम्मा गरेको निश्चित अवधिपछि दोब्बर रकम भुक्तानी गर्ने योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ। दोब्बर रकम
उर्लाबारी (मोरङ) । दुवै मिर्गाैला फेल भएकी मोरङ उर्लाबारी–६ कि २७ बर्षीया मञ्जु धिमाललाई उर्लाबारी परिवार, हङकङले रु दुई लाख ८१ हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । धिमालको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हङकङमा रहेका नेपालीले
मुस्लिम समाजद्वरा राहत बितरण
प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ १, २०७४
-रबिन्द्र बराल रंगेली - माेरङमा रहेको मुस्लिम समाजले बिहीबार रंगेली नगरपालिका र धनपाल गाउँ पालिकामा राहत बितरण गरेको छ । माेरङकाे अति बाढिपिडित प्रभावित क्षेत्र मा अतिविपन्न परिवारलाई राहत बितरण गरेको छ । धनपाल गाउँपालिका
तीन छोरी गुमाएका कमीलाल थारुलाई प्रधानमन्त्रीले दिए ६ लाख, घर बनाइदिने आश्वासन
बाढीले घर भत्किएर तीन छोरी गुमाएका कामीलाल थारुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। बाढी पीडितको अवस्था बुझ्न बाँके पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको निर्णय अनुसार ६ लाखको चेक दिएका